Steam nambara tamin'ny fomba ofisialy ho an'ny Linux | Avy amin'ny Linux
Nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny Steam ho an'ny Linux
Androany maraina tamin'ny alàlan'ny tranokalan'ny Tena Linux Fantatro ny momba izany fanambarana ofisialy amin'ny ampahany Valve fa efa miasa izy ireo ny mpanjifa Steam ho an'ny Linux, ary koa ny fitondrana ny lalao Havia 4 Maty 2.
Miasa ny mpamorona Ubuntu, na dia azo ampiasaina amin'ny fizarana hafa ankoatry ny fanokafana bilaogy iray izay hanehoan'izy ireo hevitra momba ny fivoaran'ny fampandrosoana. Ao amin'ny fidirana voalohany dia maneho hevitra momba ny zavatra efa niasan'izy ireo izy ireo:
Alaivo ny mpanjifa Steam Linux hanana ny fiasan'ny kinova Windows rehetra.
Optimize Left 4 Dead 2 hihazakazaka amin'ny hafainganam-pandeha ekena amin'ny OpenGL.
Lohateny Valve fanampiny port.
Mety haharitra elaela izany, fa farafaharatsiny ofisialy izao. Raha ny lalao hafa notanterahin'izy ireo dia nanantena izy Antsasak'aina, Portal y Team Fortress 2 ho isan'izy ireo ^^
Manantena izahay fa hisy vaovao tsara hafa atsy ho atsy, nefa tsy maintsy hipetraka amin'ny fiandrasana isika.
Valve ofisialy bilaogy ho an'ny Linux
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny Steam ho an'ny Linux
Efa manana fahafinaretana ampy aho manandrana ny Distros, milalao Mahjong ary manandrana mianatra bebe kokoa momba ny GNU / Linux .. hehe ..
Saingy mazava ho azy, tsy manala baraka ny zava-mitranga aho, hahasarika mpampiasa bebe kokoa izany, ary mety hidika koa izany fa tsy ho ela dia hanana mpamily ho an'ny karatra sary.
Faly aho, miaraka amin'ny fahaizako milalao Counter Strike milamina, efa faly kokoa aho .. hehe ..
Azafady mpilalao aho raha milaza ny tenako amin'ny fomba tsy mety, raha izany, tsy izany no fikasana, fa ny mitanisa ireo fomba manetriketrika mba hifalifaliana .. hehe ..
jackspaicer9000 dia hoy izy:
Tonga amin'ny toerana misy azy ireo mpamily ary tsy maintsy nandao ny linux aho mba hilalao kilalao marobe hitako ary nanao partition linux hafa
Valiny amin'ny jackspaicer9000
Tsara, tsara fa taorian'ny resa-be dia be dia nohamafisin'izy ireo ihany queda Mijanona fotsiny mandra-pahatongan'ny fahavononany (raha nanaiky fanampiana izy ireo dia ho vita aloha ..). Ny NVidia sy ny AMD ve hametraka ny bateria amin'ireo mpamily?
Heveriko fa zava-bita tsara ho an'ny mpampiasa Linux ny zavatra lazainao amin'ny farany. Na dia efa nisy fandrosoana be aza teo amin'ny lafiny fanohanana sary, dia mbola lavitra ny lalana.
Eny, toy ny odyssey amin'ny fitsitsiana angovo (sy ny hafanana be loatra) an'ny GPU NVidia / AMD. Fa farafaharatsiny miasa izy ireo 🙂
Eny, tsy mafana loatra ny Nvidia ahy….
Ny tiako holazaina dia, miaraka amina mpamily maimaim-poana fa tsy ny GPU rehetra, ny sasany fotsiny. Ho an'ny fanaovana zavatra amin'ny alàlan'ny injeniera avadika 😛
eny eny, farafaharatsiny miasa izy ireo. ny rahalahiko manana Radeon amin'ny PC desktop -ny, ary ny marina mandeha tsara amin'ny tompony, na dia tsy ampitahaina amin'ireo mpamily Windows aza izany.
Marina ny anao rehefa miasa araka ny tokony ho izy ny mpamily, dia ho fampitandremana ho an'ireo mpilalao sy ireo izay te hampiasa ny herin'ny lalao ankafiziny indrindra, Compiz, KDE - Gnome (na dia tsy mila sary be intsony aza izy io amin'ny endriny farany. fanafainganana) sy zavatra hafa tsy fantatro.
(...) ny vahoaka mihorakoraka dia mihoby "DotA2, DotA2, DotA2 ..." hehehe, manantena azy isika ... xD
TPT. DoTA…. uff, tsy dia tiako loatra io.
Na Dota, na StarCraft… WarCraft kely, WoW ary Diablo dia tena eny !! HAHA
Starcraft sy Diablo eny. ny tsara indrindra!
Raha ny marina dia mahasosotra ahy ny starcraft ary ny BAIBOLY dia BORING XD
Tadidiko tsara fa ohatrinona ny vidin'ny fampielezan-kevitra farany tamin'ny terrants Starcraft tany am-boalohany, heveriko fa nantsoina hoe "Zanakalahin'i Korhal"
Diablo tokoa!, Na ny taloha no ny ankehitriny !!!
Wow, tsapanao ve izay tafiditra ao? Fantatrao ve ny fotoana ara-tantara iainan'ny GNU / Linux?
Nandritra ny 10 taona na mihoatra, nanana ny rafitra fototra tsara indrindra sy feno indrindra izahay ary fitaovana tsara indrindra ho an'ny tambajotra ary miasa amin'ny ambaratonga ambany amin'ny rafitra.
Nandritra ny 5 taona dia nanana rafitra GNU / Linux azo antoka tanteraka izahay izay azo apetraka tsy ho mpahay siansa rocket.
Nandritra ny roa taona, ny fanontana sy ny fanaovana scanning antontan-taratasy dia tsy misy dikany, mora kokoa noho ny ohatra Windows aza satria tsy misy mpamily / modely apetraka, tafiditra ao anaty rafitra ny zava-drehetra, tena Plug & Play izany.
Ankehitriny miaraka amin'ny fahatongavan'ilay sehatra manan-danja indrindra amin'ny fivarotana lalao sy fifanakalozan-kevitra ataon'ny mpampiasa marobe, dingana iray miala amin'ny fampielezana ny fampiasana ny GNU / Linux amin'ny trano rehetra 🙂
Ubuntu mety manana zavatra tsy tiantsika, fa ny hery entiny mandroso ny fananganana ny GNU / Linux amin'ny fomba marobe dia tsy azo lavina.
Azoko antoka fa ao anatin'ny roa taona, raha be indrindra, ny teboka tapaka an'ny GNU / Linux ho toy ny sehatra hampiasaina betsaka, indrindra ny Ubuntu: hatramin'ny fitrandrahana 14.04 Ubuntu, fanararaotana GNU / Linux.
Miombon-kevitra tanteraka aminao aho fa midika fandrosoana lehibe izany hampidirana ny GNU / Linux ao amin'ny birao iraisana sy amin'ny ezaka lehibe ataon'ny Ubuntu sy Canonical hahatonga azy io ho iray amin'ny maro an'isa ... Na dia hevitra tena manokana aza izany dia tsy mino aho fa lalao video (loharano mikatona ny ankamaroany) feno herisetra ary tsy misy tanjona ara-panabeazana sy ara-kolontsaina no loharano mety indrindra amin'ny filozofia Open.
OpenArena dia feno herisetra, tsy misy fikasana fanabeazana sy kolontsaina ary «Misokatra» xD
mety, fantatro fa misy lalao misokatra, hoy aho ny ankamaroany.
Marina ny momba ny herisetra, tsy mifanaraka amin'ny fanabeazana sy ny kolontsaina izany, fa ny iray amin'ireo zavatra narovan'ny filozofia Open dia ny fahafahantsika mampiasa izay tiana rehetra nefa tsy apetraka amintsika.
Fony aho tany am-pianarana dia nampanantena izy ireo fa hampianatra anay hampiasa Linux ary tsy misy na inona na inona ampiasainay fotsiny "ny varavarankely kely" ary satria tsy niambina anay akory izy ireo dia nametraka ny lalao tadiavinay ary satria saika mandrafitra azy ireo foana (indray mandeha isan-kerinandro) mandritra ny tapitrisa ireo. Ireo viriosy niditra tao aminy dia saika nangatsiaka mihitsy satria tao amin'ny kilasy manaraka dia nanohy ny toerana nijanonantsika izahay.
Saingy tsy maintsy nokapohin'izy ireo ianao, hahaha ... ny marina dia ilaina ny fialam-boly sy fialamboly, satria leo ny milalao Counter, MK, SF, RPGs ary Adventures ny sary miaraka amin'ny daka ... Fa miala lalina izy ireo tsy misy afa-tsy fahatsiarovana raha toa ka mametraka kolontsaina kely ankapobeny amin'izy ireo farafaharatsiny, dia hitovy amin'ny Age of Empires, ohatra, dia hahaliana kokoa izy ireo.
Efa ela aho no niandry an'ity fotoana ity ...
Nesorinao ny lahatsoratra rohy Zanaka ... fantatrao fa ny lohahevitra momba ny etona dia ahy xD
HAHAHAHA !!! Eto dia ho tsara ... HAHAHA.
mmmm, mampihomehy, heveriko fa nanatsara ny Firefox 14 aho ary tsy nila nanova ny solotenan'ny mpampiasa izany.
Eny, ilaina izany satria hitako fa mampiasa ny kinova 13.0.1 ianao
hehe, adinoko io antsipiriany io. raharaha ny fanovana ny kinova ao amin'ny mpampiasa mpampiasa. Heveriko fa izany.
Ho ahy koa ..
efa xD ko
Manontany tena aho raha manana tanjona hafa izy ireo ao an-tsaina, toy ny fanaovana SteamBox (heveriko fa namaky zavatra momba izany aho). Ny lalao amin'ny 3d sns dia tsy tonga na mankany amiko, simcity fotsiny no nilalaovako sy mpitsongo sasany. Ny hetsika an-tsary dia tiako indrindra ary noho izany, scummvm dia ampy ary manana be dia be aho. Raha tsy izany dia natokana hilalao pokemon na kirby amin'ny emulator gba aho. Inona no holazaiko? Olona tsotra aho
Ahoana raha toa, ity orinasa ity dia afaka manery ny fanatsarana ny mpamily, izay hahatonga ny traikefa ho tsara kokoa ho antsika izay mampiasa mpitantana varavarankely misy vokany, toy ny kwin compiz sns. Ary koa, ny fialan-tsiny "amin'ny Linux tsy misy lalao" dia hiraraka kely ihany.
Na dia manontany tena aza aho hoe inona no nanjo an'i Xorg sns.
Uffffffffffffff afaka hanohy milalao Half Life fe ihany aho amin'ny farany
\_ NA /
Raha toa ka hiteraka olana kely amin'ny sary ity ao anatin'ny roa taona, dia ho dingana tsara izany.
Sary sy wifi, ireo biby mainty an'ny linux
Ary webcam, aza adino ireo webcam.
Marina izany, satria tsy manana aho dia tsy tadidiko, xd
Efa hitako ny famerenako ny vavahady 1 sy 2 (rehefa manao ny seranana izy ireo)
Manantena izy ireo fa tsapan'izy ireo fa ny OpenGL dia tsara noho ny DirectX 😛
Efa fantatr'izy ireo fa adala izy ireo.
OUYA: ny console amin'ny birao loharano misokatra
Navoaka Android x86 4.0 RC2